2(보산역3분) -Ihamba ngezinyawo imizuzu engu-3 - I-Airbnb
2(보산역3분) -Ihamba ngezinyawo imizuzu engu-3
Bosan-dong, Dongducheon, Gyeonggi Province, i-South Korea
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-택근
U-택근 Ungumbungazi ovelele
Ingasetshenziswa njengendawo yesivakashi kuphela. Kunekamelo lokulala elilodwa nendawo yokuphumula nekhishi. Imibhede eyengeziwe ne-futons zizonikezwa. I-boiler ifakwe ngaphandle futhi awusoze uthole i-carbon monoxide. Itholakala emizuzwini engu-3 kude nesiteshi sase-Bosnia.
Isendaweni yokuhambahamba imizuzu engu-1 ukusuka esitolo esilula kanye nemizuzu engu-3 yokuhamba ukusuka esitolo sokudla kanye ne-P.C. Laundromat.
Le ndlu isetshenziswa kuphela yigumbi elilodwa, igumbi lokuphumula elingu-1, nesivakashi esingu-1. Itholakala emizuzwini engu-3 ukusuka Esiteshini sase-Bosnia. I-boiler ifakwe ngaphandle. Awunakuze ungene nge-carbon monoxide.
Ikamelo 1 Ikamelo lokuphumula 1 Isivakashi yindlu kuphela. Itholakala emizuzwini engu-3 ukusuka e-Bosan Station... Leli gumbi liyigumbi elisetshenziswa kuphela isivakashi esisodwa egumbini lokuphumula. Itholakala emizuzwini engu-3 ukusuka Esiteshini sase-Bosnia.
4.83 · 46 okushiwo abanye
Kuwuhambo lwezinyawo lwemizuzu engu-3 ukusuka e-Bosan Station.
약간의 영어 가능
Ungaxhumana nathi noma nini
U택근 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Bosan-dong, Dongducheon namaphethelo